စီးပွားရေးသတင်းတို Archives | Page 23 of 30 | Frontier Myanmar
ရန်ကုန်၊ ဖေဖော်ဝါရီ ၈ လုပ်ငန်း ၁၅ မျိုးတွင် နိုင်ငံခြားသားများ လုပ်ကိုင်ခွင့်ကို နိုင်ငံခြား ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကော်မရှင်က တားမြစ်မှုနှင့် ပတ်သက်ပြီး ၎င်းတို့နှင့် တိုင်ပင်ဆွေးနွေးခြင်းမရှိခဲ့ဟု လုပ်ငန်းရှင်အချို့က ဝေဖန်လိုက်သည်။ မြန်မာရင်းနှီးမြှပ်နံှမှု ကော်မရှင်၏ ဖေဖော်ဝါရီ ၂ ရက်နေ့ ထုတ်ပြန်ချက်အရ စာနယ်ဇင်း ပုံနှိပ်ဖြန့်ချိခြင်းဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းများ၊.
မဲဆောက်-ရန်ကုန်ကြား လမ်းပိုင်းတစ်ခုကို ထိုင်းအစိုးရက ပြုပြင်ပေးမည်
ထိုင်းနိုင်ငံ မဲဆောက်နှင့် ရန်ကုန်မြို့အကြား ကုန်သွယ်မှုလမ်းကြောင်း ပိုမိုကောင်းမွန်လာစေရေးအတွက် မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းရှိ လမ်းပိုင်းတစ်ခုအား ပြုပြင်ရန် ထိုင်းအစိုးရက ထိုင်းဘတ်ငွေ ၁ ဒသမ ၈ ဘီလျံကို ခွင့်ပြုပေးလိုက်သည်။ သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး ကောင်းမွန်စေရန်အတွင် မြန်မာနိုင်ငံတောင်ပိုင်းရှိ၊ ၆၈ ကီလိုမီတာရှည်သော အိန္ဒူ-သထုံလမ်းပိုင်း ပြုပြင်မည့်အစီအစဉ်ကို ထိုင်းအစိုးရက ထောက်ပံ့ပေးမည်ဟု ထိုင်းအစိုးရ၊.
စီဘီဘဏ်က အေတီအမ်စက် အရေအတွက်ကို နှစ်ဆအထိ တိုးမြှင့်သွားရန် စီစဉ်နေ
ပြည်တွင်းဘဏ်တစ်ခုဖြစ်သည့် သမဝါယမဘဏ် (စီဘီဘဏ်) က ၎င်း၏ အေတီအမ်စက် အရေအတွက်ကို နှစ်ဆအထိ တိုးမြှင့်ရန်အတွက် ဘဏ်ကြီးများ၏ ငွေကြေးပိုင်းဆိုင်ရာ နည်းပညာနှင့် ဝန်ဆောင်မှုပိုင်းများကို အဓိကထောက်ပံ့ပေးနေသော ကုမ္ပဏီကြီးတစ်ခုဖြစ်သည့် Diebold Nixdorf နှင့် ပူးပေါင်းလုပ်ကိုင်သွားမည်ဟု ဇန်နဝါရီ ၁၉ ရက်နေ့တွင် သတင်းထုတ်ပြန်လိုက်သည်။ လက်ရှိတွင် အေတီအမ်စက်.
စတုတ္ထမြောက် တယ်လီကွန်းအော်ပရေတာက ဒေါ်လာနှစ်ဘီလျံ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမည်
မြန်မာနိုင်ငံ၏ စတုတ္ထမြောက် တယ်လီကွန်းလိုင်စင်ကို ရရှိခဲ့သည့် ဗီယက်နမ်နိုင်ငံမှ Viettel ကဆက်သွယ်ရေးကဏ္ဍတွင် အမေရိကန်ဒေါ်လာ နှစ်ဘီလျံ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသွားမည်ဖြစ်သည်။ ဗီယက်နပ်စစ်တပ်ပိုင် Viettel နှင့် မြန်မာကုမ္ပဏီနှစ်ခုတို့ ပူးပေါင်းထားပြီး Myanmar National Tele and Communication (MNTC)ဟု အမည်ပေးထားသည့် အဆိုပါ လုပ်ငန်းစုသည် မြန်မာအစိုးရထံမှ လိုင်စင်ကို ပြီးခဲ့သည့်.